Impompi kaphethiloli Bosch iyisici esibalulekile kohlelo amandla izimoto. Ngosizo lwabo, the supply fuel kwenzeka injini yemoto. Lena imininingwane ebalulekile ukuxhuma uphethiloli kanye injini, ukuqhela nomunye. Lo mqeqeshi owake wapheka emamaki amaphampu fuel wawunganikezi njengoba kwabikwa kuyi hose kukawoyela injini uphethiloli ngaphansi isenzo gravity.
izinhlobonhlobo likaphethiloli amaphampu
Namuhla, abakhiqizi imoto ukuhlomisa imikhiqizo yabo fuel amaphampu uhlobo mechanical kagesi noma. Okokuqala esetshenziswa izimoto ezifana carburetor. Bangabaholi fuel endaweni ephansi kwengcindezi uku carburetor. Electric fuel amaphampu, kunalokho, ahlele supply fuel ukuze injini ngaphansi kwengcindezi okusezingeni eliphezulu.
Manje ngivule amaphampu fuel akuvamile. Ngokuvamile, icala lo abashayela inobudlabha izimoto.
Ziyini izimbangela eziyinhloko zalokhu umonakalo:
odla uphethiloli izihlungi;
Ukugibela ngezinqola zempi fuel awunalutho.
Ngo khona kwalezi izimbangela Bosch fuel futha usebenza at zigcwele bawo futhi ngenxa yalokho agqoke ngokushesha.
Abashayeli kumele athobele:
unikele okungenani nengxenye-ukugcwalisa uphethiloli;
ukuqapha ukuseviswa we okuhlungayo nophethiloli.
amaphampu Mechanical abaletha amagobolondo ngokufaka uphethiloli uphethiloli ukuze injini. Abanaso zidinga umfutho ophakeme, ngoba zitholakala eduze komunye nomunye.
Electric fuel futha
Electric Impompi kaphethiloli Bosch isebenzisa ingcindezi ephakeme kunaleyo lokukhanda. ingcindezi High ivumela push fuel ngqo injini. Leyo mikhumbi imoto zezizukulwane ezedlule kwe-futha fuel siqhutshwa njalo. Ngo fuel yesimanje iphampa ijubane layo uma igijima kunqunywa kuphela izimfuneko zedivayisi. I futha fuel yalolu hlobo elawula uhlelo electronic imoto. It ngokuzenzakalelayo sinquma isikhundla mpintsha, indlela yokwakheka qeda nophethiloli nentshisekelo emoyeni ingxube.
Kufanele kuqondwe ukuthi uphethiloli kagesi amaphampu ukusebenzisa elikhulu kanye evuthayo, njengoba engine enikeziwe ngophethiloli ngaphansi kwengcindezi. Ngakho-ke, amaphampu ezifana ahlelwe ethangini, okuyinto wenza sikwazi ukufeza Ukupholisa ngomoya futha fuel nge fuel. Ngaphezu kwalokho, kufanele kuphawulwe ukuthi onjalo isifutho ilungiselelo fuel kwenza kube ukusebenza cishe buthule.
motor kagesi eziqhutshwa isignali futha. Ngemva kokubekela ukuthungela e imodi yemoto ikhompyutha usuke inika isignali ukuthi futha fuel iqalisiwe, futhi kuba ezidla ugesi kwenkokhelo. Injini, okuyinto ahlelwe ngaphakathi futha fuel, kuyilapho ligijima, ephakamisela ingcindezi ohlelweni nophethiloli. Nxa isitshengiselo kusukela kukhompyutha ukuqala injini akukho kuka imizuzwana ezimbili, futha fuel sivaliwe ngokushesha ngenxa yezizathu zokuphepha.
Ngaziphebeza imizuzwana embalwa yokuqala emva injini waqala umshayeli ungezwa futha ukugijima. Ngaphezu kwalokho, nophethiloli ingena futha kukawoyela ngamapayipi ekhethekile, ngemva kwalokho-ke engena uphethiloli isihlukanisi, esesula ezingcolisa kule ngxube nophethiloli. Nge le njongo, lemifanekiso fuel idinga ushintsho gqwa. Lokhu kuvumela yokuhlanza ngempumelelo kukaphethiloli. In the isinyathelo esilandelayo fuel kusengaphambili nahlanza ihlinzekwa ukuba injini. I futha fuel iyasebenza kuze injini icishiwe.
Amaphampu ukuze Vaz
Isifutho sophethiloli Bosch kagesi kuvame kakhulu ukuba kusetshenziswe i-imoto Vaz-2110, njengoba has a usayizi jikelele, njalo itholakale emakhemisi futhi akuyona eqolo.
Bosch Isibonelo Vaz
Ukuze uhlobo ngalunye uphethiloli supply izinhlelo umakhi onika kudivayisi ezimele.
Ukusebenza Bosch fuel futha ngoba Vaz-2110 kuyinto 3-3,8 ibha.
Inani elikhulu abanikazi imoto njalo uphethiloli futha ukwehluleka ngemva kokushintsha yona futha kusukela Bosch, abasebenza ezimweni ophezulu. Le sethingi kwe-futha fuel akakwazi ukuthonya ukusetshenziswa kukawoyela ngoba imoto ifakwe umugqa ukubuya lapho uphethiloli ngokweqile kumelwe abuyiswe emuva ethangini. Ngaphezu kwalokho walungiselela Regulator fuel ingcindezi. kaphethiloli kungase kwandise lapho awukwazi ukwakha ingcindezi elikhulu kule wesitimela. Ngenxa yalokho, umlomo wombhobho has usebenze kahle - abazi fafaza, futhi nje uthele amafutha okuyinto asiqediwe.
Umhlangano fuel futha Bosch ezinjalo. The main Ingxenye umzimba, okuyizinto nokufakwa for itheku futhi yokuxhuma.
Ngaphakathi kuwo kukhona kagesi dc motor ne futha roller, valve emibili amaphini amabili kochungechunge yokuxhuma amandla.
Imodeli Amapharamitha 0580453453
Bosch fuel futha 2110 ungaba izilungiselelo ezihlukile. onobuhle ezahlukene ingase ibe obuphelele ehlukile noma ububanzi we izindlu. Ukusingatha ubukhulu izindlu esebenzisa spacers ingenziwa iraba amelana uphethiloli. Ngaphezu kwalokho, embodiments we amaphampu fuel angase abe ngaphansi kwengcindezi engafani nendawo chips phezu ezikhumulweni. kudivayisi Mesh lelinenombolo lefana lezihlalo, kodwa angase abe ukuma ezahlukene.
Chip zingaphendulwa zibe yizindawo yokuhlanganela esigungwini efakwe noma okufana Vaz. Ubude futha fuel inquma nokusebenza kwawo nomqulu omncane uphethiloli ethangini.
Ngokwesibonelo, imodeli Bosch 0580453453 ubude 105 mm, 0.580.453.449 - ubude 6.5 cm, 0580453465 - ubude 9.0 cm.
I futha fuel ibekwe emotweni ithangi, ukuba sendaweni nophethiloli. Ngaphakathi kuyinto motor kagesi eliqhutshwa futha isici. Inhlanganisela ukhiqiza futha fuel kokunikeza fuel yesifunda ngaphansi kwengcindezi okusezingeni eliphezulu. Ngenxa yalokho, futha fuel ezinomsindo futhi kudinga indlu. Thina ukuxazulula le nkinga ngokwenza ngibhapathiza futha uphethiloli. Okokhelekayo epholisa imishini sekuqala ukufudumala kanye suppresses umsindo.
Kukhethwa kwesokudla futha uphethiloli
Okokhelekayo futha ngoba Vaz-2110, wathenga emakethe, kuzobiza eshibhile kabili kuka leyo modeli ithengwa okukhethekile auto esitolo. Nokho, esitolo kungenzeka ukuthola eliphezulu lento.
I ophezulu fuel futha Bosch ebiyelwe a emaphaketheni okuqinile hermetic. Iphakheji kakhulu nahlanza uphethiloli. Uma uzizwa iphunga uphethiloli, ngakho sasisincane kakhulu ukuhlukumeza ubuqotho iphasela, futhi kukhona ingozi yokonakalisa ukugqwala ukuba futha nophethiloli.
Isisetshenziswa etholakala isimo kwamanzi, is phansi Lubrication kanye nokupholisa kukaphethiloli. Uma fuel esetshenziswa izithasiselo yekhwalithi ephansi, kungashiwo konakalisa kagesi fuel futha izindlela. Uma idivayisi siqhutshwa ngaphandle kokusebenzisa izinto ezengeziwe ezomile, emabhulashini kahle, futhi-ke overheats.
abanikazi abaningi imoto uhlose esikhundleni futha fuel Bosch, ogama izici bachezuke amagugu evamile ngenxa operation eside. Pump ingcindezi kufanele luhambisane 7 eziphindwe.
amaphutha likaphethiloli amaphampu
Ake sixoxe ukwehluleka kwe-futha fuel, izindlela bona uxazulule.
Okungenani ukwehluleka ingxenye futha ezithandwa kuyinto motor kagesi. Incazelo lena imodi yayo wokusebenza, okuvumela ukunikeza Ukupholisa olunzulu nokugeza njalo. Ngokuvamile iphula centrifugal vane gidronagnetatel. Ngenxa ukungcola kulencane eziqinile uphethiloli uphendulela kanye uphethiloli bezihlikihla izingxenye supercharger (Rotor, stator, ezinamasondo) babhekana bafake abalulekile ngokuhamba kwesikhathi. Ngesikhathi esifanayo uphawu phakathi kwabo senziwa buthaka. Umphumela kulahleka umkhiqizo kunciphe ingcindezi yokusebenza olunikezwa futha nophethiloli. kuphakama Le nkinga ngenxa ukuguga futha nophethiloli. Esikhathini esiyiminyaka yokuqala ukusetshenziswa cishe ayitholiwe. Kungenzeka ukuchaza ukuma ekhethekile ukuqinisekisa ukusebenza futhi inikeza ekwindla ka ingcindezi at the kufaneleka yokuxhuma. Uma buthelela ukukhubazeka ngenxa yokuguga, imoto ilahlekelwa ukushesha futhi baqala ukuphazamiseka kule yangaphakathi omlilo injini lapho sidlula transients e futha nophethiloli. Uma bafake iba abalulekile ingcindezi yokwehla kwezinga supply chain ingafinyelela kangangokuthi injini ngeke ukuqala.
Ekwehlulekeni kwe-futha fuel kuboniswa nokwanda kokungabi umsindo ngesikhathi ukusebenza kwawo. Lokhu kubonisa evamile bafake supercharger noma eqinile izingxenye ibhoklolo kuye bezihlikihla. Lokhu enkingeni Ngokuvamile ubonakaliswa isimo sengqondo ebusika ngenxa yokuthi uphethiloli uthola ezimanzi ke ekubeni ice. Ibangelwa ice zinhlayiya awela amatshe okugaya fuel futha, futhi nadir istiraya izingxenye Blower, ukwakha phezu izimbotshana ezijulile. Ukuphazamiseka kwekhono avele ngokuvamile anemifantu umhlahlandlela Rotor supercharger.
Afakwe kagesi fuel futha amabombo kanini babe engenamsebenzi phambi izingxenye Blower. Isizathu esiyinhloko izinkinga ne operation evamile futha fuel kukaphethiloli - nemihuzuko friction izingxenye supercharger.
Ukulungisa kaphethiloli amaphampu
Ngokuvamile, futha fuel Vaz Bosch, kanye nanoma yini enye ukulungiswa akunconywa. Uma kwenzeka ukwehluleka ngokuvamile zabo kudingeka ukushintshwa. Kodwa ekuphileni kwangempela, uma ukuphatha ngobuqili embule izindlu ugingqe futha ezenziwe aluminium, izinyathelo ezilandelayo ukuze kulungiswe futhi abuyisele futha fuel ayimeleli kakhulu yenkinga.
Lapho Bosch ephezulu ingcindezi fuel futha ivulekile futhi ngokuphelele zezikhali futhi zonke izingxenye zawo ingxenye kufanele ahlolisisa. Ngokukhethekile kufanele kukhokhelwe gidronagnetatel. Uma kuwukuthi kusakhandeka, unganquma ukulungisa futha nophethiloli.
Liyadingeka esikhundleni kagesi motor ibhulashi. Ungathatha nabo elektrobenzonasosa efanayo. Futhi kubalulekile ukuba ibhoboze kwesigubhu. Uma ezilimele, le Windings motor armature kudingeka emuva ke. Catching hlehlisa, udinga ukuthatha ukunakekelwa okukhethekile ukuze alondoloze iziteshi uphethiloli atholakale Slots ihange. supercharger centrifugal kuyinto egoqekayo. Kuyadingeka ukuba ugaye evele ezilimele bezihlikihla Blower inhlangano izingxenye.
Ummbila itshe semolina kumele singeqi microns 50. Small bafake Rotor Slots akubalulekile ekusebenzeni injini futhi ayikwazi ukwelashwa ababhekana nakho. Vele lapho kuyoba reverse inhlangano, vane futha Rotor stator kufanelekile kwezinye nohlangothi lwakhe. Uma kukhona omkhulu Teaser omfisha, badinga ushintshe, usebenzisa njengoba donor amabombo yasekhaya. Uma kungekho kungenzeka ekushintsheni ezinamasondo imikhawulo kufanele sanded ukuba itafula magnetic Nagano mandrel.
Kukhona eyodwa ngaphezulu ngokuningiliziwe, ngokuvamile yesithwathwa ezinzima okuholela kungalimaza ukuba futha entsha ngokuphelele nophethiloli. Lena ekuphambukeni elihlangana. Le ngxenye ubhekwa irremovable. Ngisho ekuphambukeni elihlangana kungenzeka ukuba esikhundleni. Lokhu kudinga eyinkimbinkimbi lathe ukulungiswa isisekelo motor futha.
Udinga ngokukhulu ukucophelela nokunemba, ishizolo ekhethekile, yenza inkatho emzimbeni nezimfoloko plastic kanye okuholela inkatho push njengoba entsha.
Fixed ekuphambukeni olusha usebenzisa usimende zamazinyo noma microscrews. Kukhona futhi inhlanganisela yalezi zindlela ezimbili okunamathiselwe. Akubalulekile ukuba ugaye ekuphambukeni ukuze esikhundleni plastic. Kungcono uma kuba aluminiyamu noma ngethusi.
Wenze kahle ukuze balungise amapayipi kungenjalo kungaba nenkinga enkulu uma ingilazi elingaphandle kagesi fuel futha ngokuphephile crimped. Ngokuvamile, ukuvula kanye zavaltsevat ingilazi emuva kungenzeka kanye kuphela. Futhi sidinga amakhono eliphakeme ekuqhubeni le misebenzi. inkomishi Autopsy is mhlawumbe eyenziwa ngesandla, njengokusebenzisa ukufakwa kokumqoka kuphela blunt. Njengoba kweqa kuyinto gasket iraba kokuba flagella ukuma nesigaba isiyingi. Kumelwe silwele ukuqinisekisa ukuthi lokho akusho ubuhlungu. Ukuhlanekezela inqubo rolling kungaba kwenziwe ukusebenza, usebenzisa lathe. Lungisa futha ngophethiloli lathe, kanye ukufeza inkomishi ukuphokophela emzimbeni ngangokunokwenzeka, ukuthola tooling okukhethekile.
Ukuze wenze elungisa ukusiza ukulungisa ikhithi fuel futha Bosch, ehlanganisa imikhiqizo kuyo izihlahla zenjoloba.
Zonke imibukiso ngenhla ukuthi omunye isifiso sakho akwanele, ukuze balungise futha fuel lwenziwe qualitatively. Namanje kudingeka khona efaneleyo eziphakeme esiyingcweti, futhi tooling okukhethekile. Le nqubo ukukhanda realizable kuphela eziteshini esimisiwe. Ngaphezu kwalokho, iziteshi ezinkulu babe inqwaba izingxenye lesibili ngesandla engasetshenziswa. Ngaphansi kwalezi zimo, izingxenye ezimbili kwezintathu kungaba ukulungisa qualitatively ka lonke inani kuhlulekile fuel amaphampu.
Impilo yangempela ebonisa ukuthi ngemva kokubuyiselwa amaphampu fuel labo abazokwazi ezisebenza isikhathi eside.
abanikazi Car ngubani ukusebenza Bosch fuel futha, wamchaza ngokuyisisekelo nozwela. Phakathi izinzuzo ubizwa ngokuthi ongaphakeme price, nokwethenjelwa, ihlala isikhathi eside. Njengoba nebubi waphawula ezinomsindo.
Thermomix - kuyini? Thermomix: Izibuyekezo
Funny isihloko sencwadi - nephutha noma isizathu ukunikeza umklomelo?
Indlela ukukhetha cornices odongeni
Ramazan Abdullatipov: owayenguthisha wobukhomanisi zesayensi kanye umongameli Dagestan